Ubuntu 18.x ma ọ bụ karịa: ihe ngwọta ma ọ bụrụ na njikọta Alt + Imp Pant + REISUB anaghị arụ ọrụ maka gị | Site na Linux
Ubuntu 18.x ma ọ bụ karịa: ihe ngwọta ma ọ bụrụ na njikọta Alt + Imp Pant + REISUB anaghị arụ ọrụ maka gị
Know maara nke ahụ Ubuntu siri ike, obughi ihe nzuzu. Mgbe ụfọdụ, ihe ngwa ma ọ bụ ahụhụ nwere ike kpọgidere usoro na-adịghị ekwe ka ị malite console ịrụ ọ bụla ọrụ ma ọ bụ Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa, wdg N'ọnọdụ ndị ahụ dị oke njọ ebe ịnweghị mmepụta ọzọ, kama ịgbanyụ akụrụngwa site na ịpị ma jide bọtịnụ on / off ma ọ bụ jiri bọtịnụ nrụpụta, ị nwere nhọrọ ọzọ.
Nhọrọ a bụ pịa igodo igodo dịka ha dị Alt + Bipute ihuenyo + REISUB. Nke ahụ na-eme ka sistemụ ahụ nabata ma maliteghachi ịpụ na steeti oyi. Cheta na ị gha ijide Alt + Print Screen igodo wee nwee ike pịa igodo ndị a n'otu n'otu na-enweghị ijide ha niile n'otu oge (doro anya): R, E, I, S, U, na B. Nsogbu bụ na ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na ụfọdụ ụdị Ubuntu ...
Ihe ọrụ a na-arụ ọrụ SysReq (arịrịọ sistemụ) ma ọ bụ rịọ maka sistemụ ahụ maka kernel ịzaghachi na arịrịọ ahụ na, na nke a, regharịa usoro oyi kpọnwụrụ. Igodo na-eji:
Azịza: laghachi na keyboard ma ọ bụ unRaw.
E: Kwụsị usoro niile ma ọ bụ tErm.
M: gbuo usoro ndị ka dị ndụ ma ọ bụ fullkIll.
S: Mekọrịta diski ma ọ bụ mmekọrịta.
U - Ugwu niile faịlụ sistemụ na-agụ-ma ọ bụ Umount.
B: Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa ma ọ bụ reBoot.
Ọ bụrụ na ụdị nke sistemụ gị nwere nkwarụ na ndabara, enwere ike idozi ya ngwa ngwa. N'ihi na rụọ ọrụ ya na usoro a na-aga usoro na-eso Alt + Imp Pant iji rụọ ọrụ dị iche iche (ebe ọ bụ na enwere karịa ndị a ka m gosipụtara), ị ga-eme ihe ndị a:
Nhọrọ ọzọ bụ iji iwu na-esonụ nke ga-enwe otu mmetụta:
Cheta na maka iwu ndị gara aga ịchọrọ ihe ùgwù, yabụ mee ya ọkacha mma na sudo ma ọ bụ, ghara ime nke ahụ, dị ka mgbọrọgwụ.
Na site ugbu a gaa n'ihu, nchikota isi kwesiri ịrụ ọrụ ... Cheta na ọ bụrụ na ị gbanwee ya na faịlụ / proc / sys / kernel / sysrq, ọ ga-arụ ọrụ, mana ọ gaghị adị ndụ mgbe ịrịrịrị usoro ahụ, yabụ ị ga-agbanwe ya ọzọ. Nke ahụ bụ, ọ naghị adịgide adịgide.
More banyere anwansi SysRq
Ihe ị mere site na iwu site na ngwa gara aga bụ ịgbanwe kernel nhazi iji tọọ ya na uru 1 nke na-enyere ọrụ SysRq niile aka. Mana ị ga-amarịrị na enwere ụkpụrụ ndị ọzọ nwere ike, ọ bụrụ na ị nwere mmasị iji ha:
0 - Gbanyụọ SysRq kpamkpam.
1 - Kwado atụmatụ SysRq niile.
> 1: nkpuchi nkpuchi iji nye ọrụ ụfọdụ aka:
2 - Na - eme njikwa njikwa na ọkwa log.
4: kwado njikwa keyboard (SAK, unraw)
8 - Kwado usoro nbughari usoro, wdg.
16: gbanye iwu mmekọrịta.
32: na-enyere iwepụ na naanị ọgụgụ mode.
64: kwado usoro usoro (okwu, gbuo, oom-kill)
128: kwe ka reboot / poweroff.
176 - Na-enye ohere imekọrịta naanị, reboot, na iwegharị na ọnọdụ naanị ịgụ.
256: na-enye ohere ka ị hụ ọrụ niile RT
Nke ahụ kwuru, kwa enwere igodo ndi ozo anwansi ọzọ karịa R, E, S, M, U, B, nke ị nwere ike iji mee ụfọdụ arịrịọ na sistemụ arụmọrụ. Enwere ike iji ha n'usoro dị ka RESIUB, kamakwa ha dịpụrụ adịpụ, dị ka Alt + Screenprint + S, Alt + Screenprint + B, wdg. Ya mere, ka i wee marakwuo ohere, nke a bụ ndepụta:
B: reboot kọmputa n'enweghị nsogbu. Nke ahụ bụ, na-emeghị ịmekọrịta diski diski, ma ọ bụ ịtọpụ akụkụ ndị ejiri. Nke a nwere ike ime ka data furu efu ma ọ bụ ụfọdụ a na-ede n'oge ahụ emebi. Ọ dị ka ịpị bọtịnụ nrụpụta anụ ahụ ma ọ bụ ịpị bọtịnụ ON / Gbanyụọ nke akụrụngwa ndị ọzọ ma ọ bụ AIO.
C: agha a okuku, ịtụfu isi usoro ebe nchekwa na disk.
D: ga-ebuli usoro mkpọchi.
E: na - ezigara ihe ngosi SIGTERM na usoro niile belụsọ init / systemd / upstart, ... Nke ahụ bụ, ọ na - egbu usoro niile na - agba ọsọ belụsọ nke ahụ.
F: na-akpọ oku OOM, iji dozie okwu ụfọdụ mgbe sistemụ na-enweghị ebe nchekwa.
G: tinye mode debug mode, jiri framebuffer.
H: ga-egosi enyemaka na iji SysRq.
J: na-eme ka usoro faịlụ ma ọ bụ sistemụ faịlụ kwụsị site na iji FIFREEZE.
K: gbue usoro njikwa njikwa ị na-eji. Nke ahụ gụnyekwara eserese.
L: na-egosi nchịkọta nchịkọta nke CPU niile na-arụ ọrụ na sistemụ. Ọ bụrụ na enwere ndị ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ aka, ọ gaghị egosi ihe ọ bụla gbasara ha.
Nna-ukwu: na-egosi ozi sitere na ebe nchekwa gị.
N: tọgharịa na niceness defaults niile nnukwu mkpa na RealTime Filiks. Nke ahụ ga-ebelata nsogbu esemokwu akụ.
Ma ọ bụ: ọ ga-emechi kọmputa ahụ kpamkpam. Nke ahụ bụ, ọ naghị arahụ ụra dịka nkwụsị.
P: show registers na ọkọlọtọ.
Ajụjụ: gosipụta oge niile na-arụ ọrụ na oge elekere.
A: Gbanwee ọnọdụ keyboard site na RAW na XLATE.
S: ọ ga-emekọrịta buffers nke diski ma ọ bụ diski, ya bụ, ncheta na-echekwa ọrụ nnweta ka eme. Ya mere data gị agaghị emebi ma ọ bụrụ na i wepụ draịva ma ọ bụ ọ bụrụ na ịmalitegharị na mberede.
T: egosiputa ndepụta oru.
U: ịgbanwe-arịọnụ mode nke partitions ka na-agụ-naanị ma ọ bụ na-agụ-naanị.
V: na-amanye nrụpụta nke njikwa framebuffer.
W: na-egosi gị ndepụta nke ọrụ egbochi.
Ogwe ohere: ga-egosi anwansi SysRq igodo dị na kọmputa gị.
Cheta na obughi ihe ndia nile gha aru oru n’udi nile ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ubuntu 18.x ma ọ bụ karịa: ihe ngwọta ma ọ bụrụ na njikọta Alt + Imp Pant + REISUB anaghị arụ ọrụ maka gị
Ọ bụghị RESIUB mana REISUB.
Enwere m usoro Alt + Print Screen + REISUB, mana otu ihuenyo ahụ na-egosi ọzọ: ọ dị ka ọnụ na usoro iwu. Ha pụtara mgbe emesịrị mmelite site na ubuntu 18.04. Ọ bụ ihe na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Ọ gaghị ekwe ka m pịnye ihe ọ bụla, enweghị m ike ịnweta ihuenyo ụlọ.
Ihe dị ka ndị ọrụ Facebook nde 267 metụtara ngabiga data